"ဘိုတောက်(Botox)မလိုဘဲတင်းရင်းတဲ့မျက်နှာလေးပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ " | FirstClass
Kiko | 2018/08/01 15:23:00
ယနေ့ ခေတ်မှာငွေကြေးတတ်နိုင်သူကျားမ အရွယ်မရွေးအလှအပဆေးခန်းတွေမှာ မျက်နှာအရေးအကြောင်းကင်းစင်ပြီး နုနယ် လှပဖို့ အချိန်ပေးပြုလုပ်နေကြသလို နိုင်ငံခြားသွားပြီးခွဲစိတ်ပြုပြင်တာတွေအထိပြုလုပ်နေကြပါတယ်! ဘာလို့ လဲဆိုရင် လှတစ်မျက်နှာယဉ်တစ်ကိုယ်လုံးလို့ အဆိုရှိတယ်မဟုတ်လား? ကျမတို့ တတွေရဲ့မျက်နှာအလှအပဟာကျွန်မတို့ နဲ့မသိသူ…သူစိမ်းတစ်ယောက်အတွက်ပထမဆုံးသတိထားခြင်းခံရတဲ့နေရာဖြစ်နေလို့ ပါဘဲ…ဒါ့ကြောင့်…ကျွန်မနေ့ စဉ်အမြဲပြုလုပ်နေ တဲ့အသားအရည်တင်းရင်းလှပပြီးအရေးအကြောင်းကင်းစေတဲ့နည်းလမ်းလေးကိုမျှဝေလိုက်ပါတယ်……ဆင်းရဲ ချမ်းသာမရွေးပြု လုပ်နိုင်လို့ စာဖတ်သူအားလုံးလှပလာနိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်…
အိပ်ယာနိုးကာစမှာရေတစ်ခွက်အပြည့်သောက်ပါတယ်…ပြီးလျှင်မျက်နှာသစ်ဖို့ အတွက်ပြင်ဆင်ပါတယ် လက်ဖက်စိမ်းရည် (Green Teaအသင့်ထုပ်လေး တစ်ထုပ်ရှိရင်ဖြစ်ပါတယ်…) ကျမကတော့အရောအနှော ကင်းတဲ့လက်ဖက် အစိုအနည်းငယ်ကို
အနုစားလေးနဲ့ကျမမျက်နှာကိုပွတ်တိုက်ပေးပါတယ်……ထိုသို့ ပြုလုပ်ပေးခြင်းကမျက်နှာပေါ်က ဆဲလ်တွေကိုနိုးကြွစေပြီး ဆဲလ်အသေတွေကိုလဲသန့် စင်စေနိုင်လို့ ပါ …
မျက်နှာသစ်ပြီးကာစကျမမျက်နှာကိုမျက်နှာသုတ်ပုဝါနဲ့ထိတို့ ရုံလေးဘဲသုတ်ပေးပါတယ်…ပွတ်တိုက်ဆွဲပြီး မသုတ်ပါဘူး…မျက်နှာမှာရှိတဲ့ကျုံ့နိုင်ဆွဲနိုင်တဲ့အရေပြားကိုပျက်စီးစေမှာစိုးလို့ ပါ!ပြီးလျှင်ရှားစောင်းလက်ပတ်အနှစ်လေးလူးပေးပြီး အစိုဓါတ် ထိန်းပေးထားပါတယ်……(အိမ်မှာရှားစောင်းလက်ပတ်ပင်ကိုအိုးနဲ့စိုက်ထားပါတယ်…လိုသလိုဖြတ်တောက်အသုံးပြုနိုင်လို့ ပါ )
(၁) နွားနိူ့ ခပ်နွေးနွေး၃ဇွန်းရယ်
ရလာတဲ့မွှေပြီးသားအနှစ်ကိုပုလင်းအသန့် တစ်ခုထဲမှာထည့်ပြီးရေခဲသေတ္တာထဲမှာထားလိုက်ပါတယ်… အနည်းဆုံး၁၅ရက်ကြာ သည်အထိသိမ်းထားလို့ ရလို့ ပါ…ပြီးလျှင်တော့ကျမျက်နှာမှာသနပ်ခါးလူးသလိုလူးထားပြီးခြောက်သွေ့ အောင်ထားပေး လိုက်ပါတယ်……
ပြီးတော့ ကျမလုပ်စရာရှိတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပါတယ်…အလုပ်တချို့့လုပ်ပြီး အချိန်အနည်းငယ် ကြာလာတဲ့အခါ မျက်နှာပေါ်လူး ထားသည် များလဲခြောက်သွေ့လာချိန်မှာတော့ရေချိုးရင်းရေအေးအေးလေးနဲ့မျက်နှာပြန်သစ်ပေးလိုက်ပါတယ်…ဒီအခါမှာတော့တင်းရင်ပြီးကြည်လင်နေတဲ့ကျမမျက်နှာကိုရေချိုးခန်းမှန်မှာမြင်ရပါတယ်
ကျမကရေကိုတစ်နေ့ ၃ဗူးလောက်အနည်းဆုံးသောက်ပေးလို့ စာဖတ်သူတိုလဲရေသောက်ဖို့ မမေ့ပါနဲ့နော် ……ရေကိုမိမိနဲ့
အတောက်တွေကိုကင်းစေပြီးကြည်လင်တဲ့အရေပြားပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ အဓိကအရေးပါလို့ ပါ…………
ဒီတခါစာဖတ်သူအားလုံးအလှအပဆေးခန်းလဲသွားဖို့ မလို ခွဲစိတ်ပြုပြင်စရာလဲမလိုတဲ့ နုပျိုလှပတဲ့အိမ်တွင်းနည်းလေးနဲ့ အရွယ်တင်နုပျိုနိုင်ပြီမို့ ကျေနပ်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်……